Salaamanews » Kenya: Weerar lagu laayay dad rayid ah
Home » Warar Kenya: Weerar lagu laayay dad rayid ah Print - Daabace: SalaamaNews - Feb 21st, 2013 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Kenya oo qabatay ninkii ka dambeeyay weerarkii GaarisaMandheera: weerar lagu dilay askari Kenyaan ahWeerar ay dad Soomaali ah ku dhinteen oo ka dhacay Degmada DhadhaabHargabka shimbaraha oo wali ka jira dalka IndonesiaPuntland oo soo bandhigtay sir ku saabsan Al-shabaab kadib dagaal ka dhacay gobolka Bari
(Salaamanews)-Ugu yaraan toddobo qof ayaa lagu dilay weerar dabley hubaysan ay ku qaadday dad ku tukanayay masaajid ku yaalla deegaanka Libooye ee ku yaalla soohdinta u dhaxeysa Kenya iyo Soomaaliya.
Weerarka oo dhacay waqtiga salaaddii subaxnimo ee saaka ayaa ka dhacay deegaanka Malele oo ku dhowaad 25 km u jira xeryaha qaxootiga Dadaab.
Dad goob-joogayaal ah ayaa booliska Kenya u sheegay inay weerarka gaysteen siddeed nin oo ku hubaysnaa qoryaha AK47.
Booliska waxay xaqiijiyeen dhimashada dadka oo isugu jira shan nin iyo labo dumar ah. Ragga ayaa lagu dhex dilay masaajidka halka labada haween lagu toogtay dibadda masaajidka.
Weli lama garanayo sababta ka dambeysa weerarka iyo haddii uu xiriir la leeyahay argagaxisannimo ama aano-qabiil.
Waxaa jira dad la la’ yahay, sida ay sheegeen goob-joogayaasha.
Dilka kaddib, raggii weerarka geystay waxay gubeen guryo ka ag dhowaa masaajidka ka hor intaaney ka baxsan goobta.
Guddoomiyaha degmada Gaarisa Macallin Maxamed ayaa warbaahinta u xaqijiyay weerarka, wuxuuna sheegay in ciidamo loo diray halka uu dhibka ka dhacay si gacanta loogu dhigo dambiilayaasha.
Gobolka waqooyi bari Kenya ee ay Soomaalidu dagto waxaa ka dhacay weerarradii ugu badnaa ee la xiriira argagaxisannimo tan iyo markii ciidanka Kenya ay galeen gudaha Soomaaliya dabayaaqadii 2011 si ay ula dagaallamaan kooxda al-Shabaab.
Tags: warar « Qoraalkii HoreThe Appeals Court commenced the Hearing of the Somali Journalist’s Appeal against the verdict	Qoraalka Xiga »Burcad badeed Soomaali ah oo maxkamad lagu soo taagay Mareykanka	Halkan Hoose ku Jawaab